Yaa heli karo tallaalka COVID-19? | Who can get a COVID-19 vaccination? | Unite against COVID-19
Sida loo helo tallaalka | How to get a vaccine
Yaa heli karo tallaalka COVID-19? | Who can get a COVID-19 vaccination?
Tallaalka COVID-19 waa bilaash, khasab maaha oo loo heli karo qof walba ee New Zealand da’dooda ah 12 iyo ka badan. Dhibaato malahan waxa fiisadaada ama heerka muwaadinnimadaada tahay. Ma isticmaaleyno wax ka mid ah macluumaadka loo aruuriyay ujeedooyinka socdaalka iyo arimahaaga gaarka ah waa la illaalinayaa.
Markii aad tallaalka qaadatid, waxaad illaalineysaa nafsadaada oo aad yareyneysaa halista inaad u gudbisid COVID-19 qoyskaaga, saaxibada iyo bulshada.
Halkan waxaad ka heleysaa macluumaad muhiim ah oo cida qaadan karto tallaalka, oo ay ku jiraan xaqiiqo noocaas ah sida da’da, haddii aad uur leedahay ama naasnuujineysid, haddii aad la kulantay falcelinta xasaasiyada ee tallaalka hadda ka hor, iyo haddii aad qabtid xaalado caafimaad raaga.
Haddii aad ka yar 12
Dadka ka yar da’da 12 ma awoodaan inay helaan tallaalka Pfizer heerkaan.
Haddii aad ka weyntahay 65 sanno jir
Tallaalka wuxuu muujiyay inuu aad waxtar u leeyahay oo badqab u yahay dadka da’da ka weyn 65 sanno jir.
Haddii aad qudaar cun tahay ama aad qabtid xasaasiyad
Tallaalka wuu ku haboonyahay dadka qudaar cunka ah. Kama koobna waxyaabaha xayawaanka.
Sidoo kale kama koobna antibiyootikyo, waxyaabaha dhiiga, DNA, borotiinka ukunta, waxyaabaha uurjiifka, borotiinka badarka, waxyaabaha doofaarka, kiimikooyin, digir, ama caaga (daboolka dhalada waxaa laga sameeyay caaga dabiiciga ah – bromobutyl).
Hel liiska maadooyinka buuxa ee tallaalka Pfizer (external link)
Haddii aad uur leedahay, waad ku qaadan kartaa tallaalka COVID-19 heer walba oo uurkaaga ah.
Xogta ka timid tiro badan oo dadka uurka ah oo horaan loo tallaalay caalam ahaan ayaa muujinayo inaysan jirin walaacyada badqabka dheeraadka ah ee siinta tallaalda COVID-19.
Tallaalida inta lagu jiro uurka ayaa sidoo kale waxtar u noqon karo ilmaha, sida ay jiraan cadeynta wareejinta difaaca jirka ee dhiiga mandheerta iyo caanaha naasaha, taas oo laga yaabo inay siiso illaalo ilmaha inta lagu jiro difaaca hoormoonka.
Haddii aad qabtid wax su’aalo ah ama walaacyo, kala hadal iyaga xirfadlaha daryeelkaaga caafimaad.
Haddii aad isku dayeysid ilmo
Haddii aad qorsheyneysid uur waad qaadan kartaa tallaalka Pfizer.
Tallaalka Pfizer ma saameynayo hidahaaga ama dhalmada. mRNA ee tallaalka ma galo unugya walboo hidaha, taas oo ah meesha DNA-gaaga yahay.
Ma jiraan qeybo tallaalka ama borotiinka fayrasyada soo saaro gaaraan ugxanta ama unugyada dhalmada labka.
Haddii aad qabtay falcelinada xasaasiyada oo tallaal walba ah
Haddii uu kugu dhacay falcelinta xasaasiyada halista ah ama dhow oo tallaal walba ah ama irbid walba ee waqtiga la soo dhaafay, kala hadal midaan dhaqtarkaaga, xirfadlaha caafimaadka ama tallaalaha.
Haddii aad qabtid taariiqda xasaasiyada xun
Waa inaadan helin tallaalka haddii aad qabtid taariiqda xasaasiyada xun:
oo maadooyin walba ee ku jirto tallaalka Pfizer
ee garoojada la soo dhaafay ee tallaalka Pfizer.
Waa maxay tallaalka Pfizer — Wasaarada Caafimaadka (external link)
Haddii aadan caafimaad qabin ama qabtid qandho
Haddii aadan caafimaad qabin maalinta balantaada ama aad qabtid qandho ka badan 38°C, waa inaad daahisaa tallaalkaaga COVID-19 illaa aad ka dareemeysid wanaag.
Haddii aad qaadaneysid tallaal kale
Ma qaadan kartid tallaalka COVID-19 isla waqtiga sida tallaalada kale. Waa inaad u ogolaataa cadadka waqtiga qaar waxay ku xirantahay tallaalka.
U ogolow ugu yaraan 2 isbuuc u dhaxeyso tallaalka COVID-19 iyo tallaalka hargabka (flu).
Haddii aad leedahay balanta tallaalida COVID-19, qaado labada garoojo ee tallaalka COVID-19 marka koowaad – garoojooyinkan waxaa la siiyaa ugu yaraan 3 isbuuc u dhaxeyso. Waad qaadan kartaa tallaalka hargabka 2 isbuuc kadib garoojadaada labaad.
Haddii aadan laheyn balanta tallaalida COVID-19, qaado tallaalkaaga hargabka marka koowaad. Waad qaadan kartaa marka koowaad tallaalka COVID-19 laga bilaabo 2 isbuuc kadib midaan kadib.
Tallaalka Jadeecada, Qanjo bararka iyo Jadeecada Rubela (MMR)
Waxaan ku talineynaa inaad qaadatid labada garoojo ee tallaalka COVID-19 marka koowaad – garoojooyinkan ugu yaraan 3 todobaad u dhaxeyso.
Haddii aad qaadatid tallaalka COVID-19 marka koowaad, waxaad u baahaneysaa inaad sugtid ugu yaraan 2 isbuuc kadib garoojada labaad ka hor intaadan qaadan tallaalka MMR.
Haddii aad qaadatid tallaalka MMR marka koowaad, waxaad u baahaneysaa inaad sugtid ugu yaraan 4 isbuuc ka hor intaadan qaadan garoojada koowaad ee tallaalka COVID-19.
Haddii aad qabtid xaalada caafimaadka raaga
Waad heli kartaa helitaan hore ee tallaalka haddii aad jirtid 16 sanno iyo ka weyntahay, oo aad buuxisid mid ama ka badan oo sharuuda xigta:
Aad qabtid xaalad caafimaad taas oo micnaheeda ah inaad u qalantid tallaalka hargabka oo si shaacsan loo maalgeliyay, oo ay ku jiraan dadka uurka leh.
Lagaa helay jirada maskaxda daran (oo ay ku jiraan cudurka maskaxda raaga, cudurka maskaxda dareenka oo weyn, cudurka labo cirfoodka ama cudurka aastaamaha maskaxda, iyo dadka weyn ee hadeer helayo adeegyada labaad ee caafimaadka maskaxda heerka sare iyo la qabsiga).
Waxaad si liidato u xakameysay ama dhiig karka daran (dhiig karka waa magac kale ee loogu yeero cadaadiska dhiiga). Xaaladan, darnaanta waxaa lagu qeexay sida looga baahanyahay 2 ama ka badan oo daawooyin oo xakameynta ah.
Si daran ayaad u cayilantahay (lagu qeexay sida BMI ≥40).
Wixii tallo dheeraad ah ee ku saabsan tallaal qaadashada haddii aad qabtid xaaladaha caafimaadka kale ee daran, aad heleysid daaweyno, raajooyin, ama aad qaabaneysid daawooyin, booqo websaydka Wasaarada Caafimaadka.
Tallada tallaalka ee loogu tallogalay kooxyada gaarka ah iyo xaaladaha caafimaadka — Wasaarada Caafimaadka (external link)